Buug cusub oo loogu magac daray Tiirka Nabada oo maanta lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay Buuq cusub oo diirada saareysa xaalada Gobolada Dhexe, iyadoo buugan loogu magac daray Tiirka Nabada, Carqaladaga iyo Fursadaha Gobolada Dhexe ayaa waxaa soo bandhigtay Xarunta Cilmi baarista iyo wada tashiga ee CRD.
Kulan ballaaran oo ka dhacay maanta magaalada Muqdisho, oo ay ka qeyb galeen Mas'uuliyiin ka tirsan Xukuumada, Madaxda Maamulka Gobolada Dhexe, Aqoonyahano, Ururada Haweenka, Odayaasha, waxgaradka iyo dhalinyaro, iyadoo buugan ahaa mid qeexayay macluumaad la xiriira Xaalada Gobolada Dhexe.
"Goboladda Dhexe ee Soomaaliya waxa ay galeen xli cusub oo ay doonayain ay kaga baxaan Go’doonka Siyaasadeed, dhaqaale iyo mid ijtimaaci, dadkuna waxaa ay u soo jeesteen in aysan kaalmo ka sugin muqdishu oo ay isku tashtaaan"ayuu yiri Jabriil oo intaa ku daray in xilliga kala guurka iyo dareenka ka jira Gobolada Dhexe uu iftiiminayo in laga faa'ideysto Fursadaha qaaliga ah.
"Waxyaabaha buugan muujinaya waxaa ka mid in nabad waarta ay ku imaan karto oo kaliya marka dadka deegaanka oo ayaga la wareegaan nabadooda, waxaana jira tusaale fiican oo lagu dayan karo, waa lama huraan dadka ama hay’addaha doonayo in ay ka howl galaan goboladda dhexe inay sii kobciyaan ama wax ku daraan guulihii horay loo gaaray oo aysan baarnaamijyo cusub oo burburinaaya gulahaas aan kor looga keenin"ayuu yiri Mr Raage.
Sidoo kale waxaa kulankan ka hadlay Wasiiro, Wasiiru Kuxigeeno iyo wasiiru dowlayaal, qaar ka mid Bulshada rayidka, iyadoo kulankan si toos looga dhageysanayay Gobolada dhexe.
"Waxaa ku qoran warbixintan waxaa uu xaqiijinayaa inuu noo iftiiminayo in Taladda lagu celiyo shacabka deegaanka. Qoraalka waxaa uu noqon doonaa mid tusaale u noqda hayadaha iyo dowladaba si loo sii horamariyo Nabadda iyo Guulaha la gaaray"ayuu yiri Wasiirka Macdanta iyo Tamarka Mr Dhicisow.